တရုတ်-ဥရောပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်က အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဟု ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် အိန်ဂျလာမာကဲလ်က ယုံကြည် - Xinhua News Agency
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟမ်းဘတ်မြို့သို့ မောင်းနှင်မည့် ကုန်တင်ရထားကြီးသည် တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟဲပေပြည်နယ် စီကျားကျွမ်းနိုင်ငံတကာကုန်တွင်းဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွါရန် ပြင်ဆင်နေသည်ကို ဧပြီ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အထက်ပါမှတ်ချက်ကို အိန်ဂျလာမာကဲလ်က ၎င်း၏ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ မဟာမိတ် ဖြစ်သော CDU (Christian Democrats Union)/CSU (Christian Social Union)အား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း AFP က ဆိုသည်။
တရုတ်-ဥရောပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို ခွင့်ပြုရာတွင် အခက်အခဲများပေါ်ထွက်နိုင်သော်လည်း အလွန်အရေးကြီးသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း အိန်ဂျလာမာကဲလ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ （Xinhua）
BERLIN, May 8 (Xinhua) — German Chancellor Angela Merkel has said the China-European Union (EU) investment deal laid the foundations for “mutually beneficial” trade, citing such advantages as more reciprocity on market access, according to the Agence France-Presse (AFP).
Merkel remained convinced that the China-EU investment deal wasa“very important undertaking” despite “all the difficulties that will surely arise with the ratification,” the AFP said. Enditem
A freight train bound for Hamburg, Germany is ready to depart at the Shijiazhuang international land port in north China’s Hebei Province, on April 17, 2021. (Photo by Zhang Xiaofeng/Xinhua)